जनशक्ति नहुँदा सञ्चालनमा आएन उपत्यकाका अस्पतालले तयार पारेको 'एचडियू' बेड :: विवेक राई :: Setopati
जनशक्ति नहुँदा सञ्चालनमा आएन उपत्यकाका अस्पतालले तयार पारेको 'एचडियू' बेड
काठमाडौं उपत्यकाका ६ वटा अस्पतालले कोरोना संक्रमितका लागि भनेर तयार पारेको 'हाई डिपेन्डेन्सी' (एचडियू) बेड जनशक्ति अभावका कारण सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सह-प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीका अनुसार जनशक्ति अभावका कारण एचडियू बेड सञ्चालनमा ल्याउन नसक्ने अस्पतालमा प्रसूति गृह, कीर्तिपुर आयुर्वेद अस्पताल, नरदेवी अस्पताल, मानसिक अस्पताल, भक्तपुर म्युनिसिपल अस्पताल र भक्तपुर प्रादेशिक अस्पताल छन्।
यी अस्पतालले मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार नै एचडियू बेड तयार पारे पनि जनशक्ति नहुँदा बेड सञ्चालनमा आउन नसकेको हो।
कीर्तिपुर आयुर्वेद अस्पतालका कोभिड संयोजक डा. जीतेन्द्र श्रेष्ठ भन्छन्, 'डक्टर र नर्स अभावका कारण एचडियू बेड सञ्चालनमा आएको छैन। जनशक्ति जुटाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेका थियौं। अब मन्त्रालयले सूचना जारी गरेर जनशक्ति जुटाउनु भनेको छ। त्यहीँ अनुसार अगाडि बढ्छौं।'
मन्त्रालयले कीर्तिपुर आयुर्वेद अस्पताललाई ५० बेड क्षमताको एचडियू सञ्चालन गर्नु भनेको थियो। तर ठाउँ अभावका कारण २५ वटामात्र बेड तयार पार्न नसकिएको डा. श्रेष्ठ बताउँछन्।
जनशक्ति अभावकै कारण प्रसूति गृहले पनि विस्तार गरेको ५० बेडको एचडियू सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैन।
अस्पतालकी निर्देशक डा. संगीता मिश्रले मन्त्रालयले भने जति नै एचडियू तयार पारिए पनि जनशक्ति नहुँदा अहिलेसम्म सञ्चालनमा नआएको बताइन्।
अहिले भने जनशक्ति व्यवस्थापनको काम भइरहेको भन्दै आगामी साताबाट एचडियू सञ्चालनमा ल्याइने उनले जनाइन्। त्यसका लागि तत्काल आन्तरिक जनशक्तिबाट सञ्चालन गर्ने र पछि बाहिरबाट पनि जनशक्ति जुटाइने उनले बताइन्।
यस्तै जनशक्ति अभावका कारण एचडियू सञ्चालनमा ल्याउन नसक्ने अन्य अस्पतालमा नरदेवी अस्पताल, मानसिक अस्पताल, भक्तपुर म्युनिसिपल अस्पताल र भक्तपुर प्रादेशिक अस्पताल रहेका छन्।
ती सबै अस्पतालले २५ बेडको एचडियू तयार पारेको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले पछिल्लो समय जनशक्ति अभाव देखिएको भन्दै सबै अस्पतालहरूलाई सार्वजनिक सूचना जारी गरी आवश्यक जनशक्ति परिचालन गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिए। त्यसरी परिचालन गरिएका स्वास्थ्यकर्मीको खर्च पनि सल्लाह गरेर मन्त्रालयले नै सोधभर्ना गर्ने उनले जनाए।
मन्त्रालयले गत कात्तिकमा नै कोरोना संक्रमण उत्कर्षमा पुगेका बेला जटिल संक्रमितलाई लक्षित गरी देशभर ६ हजार एचडियू बेड थप्ने भनेको थियो। तर पछि ३ हजार बेडका लागि बजेट विनियोजन गरिएकोमा एक हजार पनि एचडियू बेड तयार भएको छैन।
विज्ञहरूका अनुसार आइसियू नपाएका संक्रमितका लागि उपचार गर्न एचडियू राम्रो विकल्प हो। यसमा संक्रमितलाई अक्सिजन दिएर उपचार गर्न सकिन्छ। त्यसैले पनि मन्त्रालयले सीमित आइसियू क्षमता भएका कारण एचडियू बेड विस्तार गर्ने जनाएको थियो।
अहिले पनि नयाँ भेरियन्टका कारण आइसियू चाहिने संक्रमितहरू दिनदिनै बढ्न थालेका छन्। उपत्यकाका अस्पतालहरूमै जटिल संक्रमितका लागि आइसियू बेड अभाव हुन थालेको छ।
मन्त्रालयले उपत्यकाका २३ वटा अस्पतालमा एक हजार एचडियू बेड बनाउने भने पनि जम्मा ८ सय २५ वटा एचडियू तयार भएको विवरणमा उल्लेख छ। त्यसमा पनि धेरै अस्पतालले एचडियू सञ्चालनमा ल्याउन सकेका छैनन्।
प्रकाशित मिति: बुधबार, वैशाख १५, २०७८, ०५:२९:००